Waxay umuuqataa in baahida loo qabo AirPods ay hoos udhacdo oo Apple ay dhaqaaqdo tab | Waxaan ka socdaa mac
Waxay umuuqataa in baahida loo qabo AirPods ay hoos udhacdo oo Apple tab uu dhaqaaqo
Waxaan muddo dheer la socon jirnay warar xan ah oo ku saabsan imaatinka suurtagalka ah ee qaar ka mid ah jiilka saddexaad ee cusub ee AirPods tanina waxay suurtogal u tahay inay adeegsadayaashu sugaan soo bandhigiddooda in badan oo ka mid ahna ay dib u dhigayaan iibsiga maanta.
Sida laga soo xigtay Nikkei, shirkadda Cupertino ayaa dalbanaysa alaab-qeybiyeyaasha yareeyaan soosaarka AirPod-yadaas inta udhaxeysa 25 iyo 30%. Sababta ayaa ah in badanaa ay haystaan ​​keyd ku filan oo ay ku soo bandhigaan baahida jirta iyada oo aan loo baahnayn in wax badan la soo saaro.
Ilo wareedyo ku dhow warkan dhimista wax soo saarka ayaa uga digay Nikkei in Apple ay bedeshay saadaasha iibka iyo hadda wuxuu qorsheynayaa inuu soo saaro 75 ilaa 85 milyan oo unug sameecadaha dhagaha ee wireless 2021. Tirada la bixiyay waxay aad uga hooseysaa saadaashii hore ee wax soo saar ee 110 milyan oo unug.
Imaatinka AirPods Pro iyo hagaajinta aaladaha tartanka Waxaa laga yaabaa inay wax ku lahaayeen hoos u dhacan iibka, taas oo saameyn toos ah ku leh soo saarida samaacadaha dhagaha ee Apple. Sidoo kale, sidaan uga dignay bilowgii, xaddiga xanta ah ee aan aragno ee ku saabsan imaatinka suurtagalka ah ee jiilka saddexaad ee AirPods ayaa ka dhigaya isticmaaleyaal badan inay sugaan inay beddelaan sameecadaha dhagaha.
Daraasadaha kale ee suuqa sida midka la qabtay intii lagu jiray Bishii Janaayo ee Counterpoint, waxaa lagu qiyaasey in Apple ay ka dhacday 41% ilaa 29% suuqa madaxa sababo kala duwan awgood wax ka yar sagaal bilood. Sida tartamayaasha laftoodu yiraahdaan, xanta iyo kuwa kale, waxay ka dhigayaan iibku inuu yaraado sidaas darteedna bakhaarada ay ku yaaliin bakhaarada
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Waxay umuuqataa in baahida loo qabo AirPods ay hoos udhacdo oo Apple tab uu dhaqaaqo
Ciyaaraha Epic waxay isku hareeraysaa khubaro caan ah dacwadooda ka dhanka ah Apple
Cusbooneysiinta firmware ee AirPods Pro iyo AirPods 2 illaa nooca 3E751